2018 मा एक राम्रो रसायन विज्ञान एसट विषय टेस्ट स्कोर के हो?
क्या रसायन विज्ञान परीक्षा स्कोर सिक्नुहोस् तपाईंलाई कलेज प्रवेश वा कलेज क्रेडिट को लागी आवश्यक पर्दछ
अत्यधिक चयनशील कलेजहरू र विश्वविद्यालयहरू जसले SAT विषय परीक्षणहरूको आवश्यकता पर्दछ सामान्यतया 700 को रसायन विज्ञान विषय परीक्षण स्कोर वा उच्चमा हेर्न चाहन्छन्। केहि विद्यार्थीहरू निश्चित रूपमा निम्न अंकमा पाउँछन्, तर तिनीहरू अल्पसंख्यक छन्। एमआईटी जस्तै धेरै शीर्ष विद्यालयहरू 700 भन्दा माथिको स्कोर राम्रो देखिन्छ।
रसायन विज्ञान एस.टी. विषय टेस्ट स्कोरको चर्चा
2017 मा, 68,536 विद्यार्थीले रसायन विज्ञान एसट विषय परीक्षण गरे।
साधारण अंकको दायरा, निश्चित रूपमा, कलेज बाट कलेज बाट व्यापक रूपमा फरक हुन्छ, तर यो लेखले एक राम्रो रसायन विज्ञान एसट विषय परीक्षण स्कोर को परिभाषित गर्दछ को एक सामान्य सिंहावलोकन दिनेछ।
पृष्ठको तल्लो तहमा रसायनले एसएटी स्कोरहरू बीचको सम्बन्ध देखाउँछ र परीक्षा लिने विद्यार्थीहरूको प्रतिशत स्तर निर्धारण। उदाहरणका लागि, 76% विद्यार्थीले परीक्षामा 760 वा तल राखेका थिए। तपाईले पनि ध्यान दिनुहुनेछ कि सबै परीक्षण-ग्राहकहरूको लगभग आधाले परीक्षामा 700 वा बढी बढी स्कोर गरे।
SAT विषय परीक्षण स्कोर सामान्य एसएटी स्कोरहरूको तुलनात्मक छैन किनभने विषय टेस्टहरू उच्च स्तरका उच्च विद्यार्थीहरूले SAT भन्दा उच्च प्राप्त गर्न सकिन्छ। जबकि ठूलो संख्यामा कलेज र विश्वविद्यालयहरूले SAT वा ACT स्कोर चाहिन्छ, मात्र इलाइट र अत्यधिक छनोट स्कूलहरूले SAT विषय परीक्षण स्कोरहरूको आवश्यकता छ। नतिजाको रूपमा, SAT विषय परीक्षणहरूको लागि औसत स्कोर नियमित SAT को लागि तीभन्दा बढी हो।
रसायन शास्त्र विषय परीक्षणको लागि, साईन स्कोर 665 हो (सामान्य एसट गणित र मौखिक वर्गहरूको लागि लगभग 500)।
के क्यालेटिक्स एसएटी विषय परीक्षणको बारेमा कुन कलेजहरू भन्नुहुन्छ
अधिकतर महाविद्यालयहरूले आफ्नो SAT विषय परीक्षण प्रवेश डेटा सार्वजनिक गर्दैनन्। तथापि, कुलीन महाविद्यालयहरूको लागि, तपाईलाई 700 हरूमा इमानदार रूपमा स्कोर हुनेछ।
तथापि, केही विद्यालयहरूले प्रायजसो प्रतियोगी आवेदकहरू बाट कस्तो स्कोर देखाउँछन् भनेर स्पष्ट पार्छन्।
एमआईटीमा , मध्य 50% विद्यार्थीहरूले जसले 740 र 800 बीचको साइन्समा एसटी विषय परीक्षण गरे। यसका बारे सोच्नुहोस्, सबै सफल आवेदकहरूको एक चौथाई भन्दा बढीमा एक पूर्ण 800 रन बनाइयो। 600 सेकेन्डमा आवेदकहरू हुनेछन्। स्कूलको लागि आदर्श भन्दा राम्रो छ
आइआईवी लीग आवेदकहरूको लागि सामान्य दायरा एमआईटी भन्दा कम छ, तर तपाई अझै पनि 700 हरूमा स्कोर गर्न चाहानुहुन्छ। प्रिन्सटटन युनिभर्सिटीमा , 710 र799को बीचमा आवेदकहरुको मध्य 50%। इआईवी लीगमा विज्ञान र ईन्जिनियरिङ कार्यक्रमका आवेदकहरू त्यो दायराको माथिल्लो पङ्क्तिमा हुन चाहन्छन्।
अत्यधिक चुनिंदा उदारवादी कला कलेजहरूले समान दायराहरू देखाउँछन्। मेडबरी कलेजले नोट कि प्रवेश मान्छे कम से कम मध्य रेंज मा स्कोर देख्न को लागी प्रयोग गरिन्छ, जबकि विलियम्स कलेज मा 700 देखि माथि स्कोर को सबै स्वीडेन्ट छात्रों को दुई-तिहाई देखि अधिक।
यस सीमित डेटा देखाउँछ, एक मजबूत अनुप्रयोग सामान्यतया 700 हरूमा SAT विषय परीक्षण स्कोर हुनेछ। तथापि, तथापि, सबै कुलीन स्कूलहरू समग्र प्रवेश प्रक्रिया छ, र अन्य क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण बल कम भन्दा कम आदर्श परीक्षण स्कोरको लागि बनाउन सक्छ।
रसायन विज्ञान एसट विषय परीक्षण स्कोर र प्रतिशत
रसायन विज्ञान एसट विषय परीक्षण स्कोर प्रतिशत
> माथि तालिकाको लागि डाटा स्रोत: कलेज बोर्ड वेबसाइट।
रसायन विज्ञान क्रडिट र विषय परीक्षण
कोर्स क्रेडिट र रसायन विज्ञान मा प्लेसमेंट को लागि, धेरै अधिक महाविद्यालयहरु को एसएटी विषय परीक्षा परीक्षा को तुलना मा एपी परीक्षाहरु को पहिचान। तथापि, केही अपवादहरू छन्। उदाहरणका लागि जर्जिया टेकमा, रसायन विज्ञान एसट विषय परीक्षण स्कोर 720 भन्दा माथि विद्यार्थीले क्रेडिट CHEM 1310 को लागि क्रेडिट कमाउन सक्छ। टेक्सास ए एन्ड एम मा, 700 वा उच्चको स्कोरमा विद्यार्थीले योग्य CHEM 102 को लागि विभागीय परीक्षा लिन योग्य हुन सक्छ। सामान्यतया, तथापि, विषय परीक्षामा तपाइँ कलेज क्रेडिट कमाउन गणना नगर्नुहोस्। विद्यालयको प्लेसमेंट नीति सिक्नको लागि आफ्नो कलेजको रजिस्ट्रारको साथ जाँच्नुहोस्।
तपाईले केहि कलेजहरू पनि भेट्टाउनुहुनेछ जुन उनी विज्ञान विज्ञान आवश्यकताको भागको रूपमा रसायन शास्त्र विषय परीक्षणमा राम्रो स्कोर स्वीकार गर्नेछ। अन्य शब्दहरूमा, यदि विद्यालयलाई तीन वर्ष उच्च विद्यालय विज्ञान चाहिन्छ भने, यो दुई वर्षको विज्ञान लिन सम्भव छ र तेस्रो क्षेत्रमा विज्ञान एसएटी विषय परीक्षणमा राम्रोसँग सम्भव हुन सक्छ। अकादमिक प्रवेश आवश्यकताहरू पूरा गर्न व्यक्तिगत विद्यालयको नीतिहरू जाँच गर्नुहोस्।
रसायन विज्ञान विषय परीक्षणको बारेमा एक अन्तिम शब्द
यदि रसायन विज्ञान तपाईंको शक्ति होइन, चिन्ता नगर्नुहोस्। कुनै कलेजले रसायन विज्ञान एसट विषय परीक्षण चाहिन्छ, र माथिल्लो ईन्जिनियरिङ् र विज्ञान स्कूलहरूले विद्यार्थीलाई अन्य विज्ञान र गणित विषय परीक्षणबाट छनोट गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, विषय परीक्षणहरू परिप्रेक्ष्यमा राख्न निश्चित हुनुहोस्। अधिकतर विद्यालयहरू विषय परीक्षण स्कोरहरू आवश्यक पर्दैन। जो कि समग्र भर्ती हुन्छ, यति बलियो ग्रेड, नियमित एसएट , एक स्टेलर निबंध मा उच्च अंक , र प्रभावकारी अपरवर्ती क्रियाकलापहरूले सबैलाई कम-भन्दा कम विषय परीक्षण परीक्षण स्कोरको क्षतिपूर्ति गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
तपाईं SAT विषय टेस्टको लागि यो उपकरण फेला पार्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले तपाइँको सायद GPA र सामान्य एसएटी स्कोरहरूमा आधारित एक कलेजलाई स्वीकार गर्ने मौकाहरू पाउनको लागि यो नि: शुल्क क्यालेन्डरले क्याप्सेक्सबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
ओकेलाहोमा कलेजहरूमा प्रवेश गर्न ACT को स्कोर
पश्चिमी एथलेटिक सम्मेलनमा प्रवेशको लागि एसएटी स्कोर
बिग 12 सम्मेलनमा प्रवेशको लागि ACT स्कोर
व्यवहार व्यवस्थापन युक्तिहरू
सामान्यतया क्लफ्सको प्रयोग गरिएको प्रकार
अनिवार्य वुडी गथरी गीतहरू
Waltz को आधारभूत बारे थप जान्नुहोस्
ग्रेट गोल्फ वृत्तचित्र, हाइलाइट रील्स, र इतिहास डीभिडीहरू
के मलाई पुलिस मेरो आईडी देखाउन चाहन्छु?
परिभाषाका परिभाषा परिभाषा परिभाषा
एलीशा: ईलीशाको प्रोफाइल र जीवनी, पुरानो नियमको अगमवक्ता र बाइबिल चित्रा
पहिलो पनिकर युद्धको घटनाहरूको अवलोकन
नागरिक युद्धका पुर्खाहरूको खोजी
10 को बारे मा प्राचीन माया
इटालियन Verb Conjugations: Pranzare
रोममा पन्तहेन को प्रभावकारी वास्तुकला
मसाले ब्याक्टेरियालाई मार
चेयरलेडिङ मजा तथ्य र इतिहास
मेजर लीग बेसबल स्टेडियम
10 ल स्कूल स्कूल व्यक्तिगत बयान लेखन प्रोम्प्ट्स
संघीय पार्टी: अमेरिकाको पहिलो राजनीतिक पार्टी
के यो Cupping प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?
'हे क्रिसमस ट्री' शब्दहरू
मेक्सिकन-अमेरिकी युद्ध 101
पीजीए टूर कट नियम के हो?
अंग्रेजी शिक्षाको लागि लेखनमा समानता
'कास्टे दिवा' गीत, अनुवाद, र इतिहास
इंद्रधनुष फायर हेलोवीन जैक-ओ-लालटेन
5 नम्बर सारांश के हो?